DAAWO: Musharax Asad Cabdullaahi oo lagu soo dhaweeyey magaalada Qardho, kana hadlay.. – Puntlandtimes
DAAWO: Musharax Asad Cabdullaahi oo lagu soo dhaweeyey magaalada Qardho, kana hadlay..
December 7, 2018 W LAASCAANO
QARDHO(P-TIMES)- Musharrax Madaxweyne Jen, Asad Cabdullaahi Cismaan oo kamid ah musharaxiinta u tartamaya Madaxweyne-nimada Puntland ayaa soo gaaray magaalada Qardho ee xarunta gobalka Karkaar, waxaana si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada.
Musharaxa ayaa boqolaal Shacab ah ay ku soo dhaweeyeen banaanka iyo gudaha magaalada Qardho, waxaana hadal u jeediyey uu ka hadlay xaaladdaha siyaasadeed iyo qorshihiisa waxqabadka.
Musharaxa ayaa sheegay in uu wax badan ka qaban doono Puntland, haddii uu ku guuleysto madaxweyne-nimada Puntland, waxaana uu diiradda saaray Ammaanka, gobalada maqan iyo arrimaha la xariira doorashooyinka.
Jeneraalkan oo horey soo xukumayey Hay’adda Sirdoonka iyo nabadsugidda Puntland ayaa sheegay in uu gacan bir ah ku qaban doono Ammaanka Puntland, isagoo cadeeyey in aysan jiri doonin gobalo dambe oo laga haysan doono mandiqada.
Musharaxa ayaa cambaareeyey xarig loo gaystay qaar kamid ah taageerayaashiisa oo kusugnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobalka Sool, oo ay gacanta ku hayso maamulka Somaliland.
Taageerayaasha musharax Madaxweyne Jen, Asad Cabdullaahi Cismaan oo kamid ah musharaxiinta u tartamaya Madaxweyne-nimada Puntland ayaa maanta iskugu soo baxay gudaha iyo banaanka magaalada Qardho.
Cabdirashiid Abshir Muuse says:
Inan gumeedyada Dubays(Wasageeli) mahaane cid diidahaysa madaxweynaha cusub Puntand ma jidho. General Asad 98% tageerada xildhibaanasa Puntland ayaa haystaa.
Warsangeli ayaga dhan argagaxiso waaye hade ma ahaan wax qarsoon argagaxisada gobalka Sanaag ay ka imaadeen ka dib soo gasho gobolka Bari. Shiine Culay iyo beeshiis argagaxisada tageeradiis ha ka haraan. General Asad Cabdullahi bil ka dib madaxweyne ayaa ka noqonahaya Puntland inuuusan argagaxiso uu naxariisanahayn waa niid la hubo. Difaac iyo Maamul Wanaag.
Waar xishooda oo dhaqan xumada iyo beelaha aad ka dhex kalumeysasan ka dhex oo wax iskula hadha Asad iyo tolkii wanaaga iyo jacaylka ay isu hayaan waxaa kaaga filan booqashadii badhan iyo dhahan saldanadii warsangeli murashax uugumey yeedhin xitaa ee madaxweyne ayey ugu yeedheen Asad
Faarax Ciise says:
Warsangali Majiyahan, Galgala, iyo Af Urur, ma lagu xasuuqi lahayn laakin ayaga argagaxisada la shaqeynahaya. Labawajiilayaal waaye Warsangali.
Cali Salebaan says:
Dubays oo toban qof gaarahayn maxa adinka uu xayaysiinaysiin? Ka hara nimankaas maxa yeelay masaakiin waaye, Dishiishe iyo Majerteen ayaa badankiis dhulka ay degi qeybsaday kana qaatay wax uu haray ma leh Dubayskan aad sheegeysiin.
Dhulka inta uu hartay Dubays hada ayaa Maxamuud Salebaan iyo Dishiishe qabsan rabaan madaxweynaha cusub doorashadiis ka did.
Dubayska tobanka qof ah yuusan Majerteen dhan eedayn sida Shiine Culay, ma ahaan saas, waa Maxamuud Salebaan iyo Dishiishe waxa duulanka ku ah dhulkiin
india is barata genrica